Atrik’asa fiompiana hazandrano - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tontosa nandritra ny roa andro tao amin’ny Hôtel des Thermes Antsirabe ny atrikasa fandinihana ny fanatsarana ny famokarana anaty rano. Nokarakarain’ny talem-paritry ny Jono sy ny Harena anaty rano sy ny Ministeran’ny Fambolena sy Fiompiana ary Jono ary ireo mpisehatra amin’ny famokarana haza anaty rano notsongaina isam-paritra.
Nivohitra teto koa ny volavolan’ny didim-pitondrana mahakasika ny fametrahana karatra ho an’ny mpiompy trondro manerana ny Nosy mba hahafahana manana antontanisa sy haha matihanina ary haha ara-dalàna azy ireo.
Ireo olona izay manao ny asa ara-dàlana no mahazo ny tombontsoa rehetra rehefa misy ny fanampiana amin’izany seha-pihariana fiompiana trondro izany. Ankoatra ny fiompiana trondro dia misy ny famokarana lomotra sy fiompiana janga na “concombre de mer”, ny fiompiana tsitsika izay efa mandroso eto amintsika. Misy ny fiompiana ahazoana atodin-trondro. Voalohany mpamokatra “caviar” ihany koa i Madagasikara aty Afrika ary any amin’ny lac Mantasoa no misy azy. Araka izany dia tsy ny fiompiana trondro ihany no iandraiketan’ny fiadidian-draharaha misahana ny famokarana sy ny fampandrosoana anaty rano, ary tsy an-dranomasina ihany fa na an-dranomatsaboka na andranomamy ihany koa.
Coronavirus sy ny vidin’entana
Na dia nisy aza ny fanambaran’ny mpitondra teto Antsirabe mba tsy hampiakaran’ny mpivarotra ny vidin’entana taorian’ny fanambarana mifanesisesy teto amin’ny firenena momba ny fisian’ny tsimok’aretina Coronavirus na Covid-19 dia mbola misy ihany ireo minia mampiakatra izany. Betsaka ny mpivarotra tsy ahitana intsony ireo entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro. Misy ny mpivarotra mampiakatra avo telo heny ny vidin’ny voasarimakirana amin’izao kanefa ao anatin’ny vanim-potoana mahabetsaka azy. Na izany aza dia misy ireo mpanjaitra amoron-dalana nahazo tsena afaka misitraka ny fanjairana sarom-bava amin’ny vidiny 2000 Ariary. Fotoana hifampitsinjovana ny amin’izao fa tsy fanararaotana akory. Hifanohantohanana amin’izao andro sarotra sy sedra mandalo eto amin’ny firenentsika sy izao tontolo izao.